उपचारको क्रममा बुवा बितेपछि ऋण तिर्न दोहोरीमा गीत गाउँदै, नेपाल आईडलका दिपराज खत्री ! भावुक हुँदै दुखद जीवन कथा सुनाए (भिडियो हेर्नुस) – सुदूरखबर डटकम
उपचारको क्रममा बुवा बितेपछि ऋण तिर्न दोहोरीमा गीत गाउँदै, नेपाल आईडलका दिपराज खत्री ! भावुक हुँदै दुखद जीवन कथा सुनाए (भिडियो हेर्नुस)
label shishir query_builder August, 11 2019
यतिबेला हामी ठमेलको एक दोहोरी सांझमा छौं । ठमेलमा निकै चर्चित यो दोहोरी सांझ हो, नगरकोट दोहोरी सांझ । जहां यतिबेलाका चर्चित लोक दोहोरी गायक गायिकाहरु टिका सानु, मानसिंह खड्का, रबिन लामिछाने लगायत थुप्रैले मिठा मिठा दोहोरीका भाका पस्केर आफ्ना दर्शक र स्रोतालाई झुमाउंछन् ।
हामी पुग्दा नगरकोट दोहोरी सांझमा टिका सानु र मानसिंह खड्का आफ्नो प्रस्तुतति सक्काएर बसिरहेका थिए भने आएका पाहुनाहरुलाई दोहोरी हैन सुमधुर गीत संगीत सुनाईरहेका थिए, नेपाल आईडल सिजन २ का चर्चित प्रतिस्पर्धी दिपराज खत्री । हो, आईडलको सिजन २ मा टप २० सम्मको यात्रा तय गर्दै सबैको मन जितेका दिपराज केहि महिनादेखि यहि दोहोरी साझमा गीत गाईरहेका छन् । बुवा र आमा दुवै गुमाएका दिपराजको दुखद कथा छ । परिवारमा आफु भन्दा साना भाई बहिनी हुंदा जिम्मेवारीले उनलाई दोहोरी सांझसम्म पुर्यायो । आउनुहोस, दिपराजको आवाजमा मिठो गीत सुन्दैउनको जीवन कथा सुनौं । दोहोरी सांझको काम सक्काएर आफ्नो कोठामा पुगेका दिपराजसंग हामीले गरेको कुराकानी पुरा हेर्नुहोस ।
गरिब, दुखीको हिरो शिशिर भण्डारीको नयाँ गीत ‘बेईमानी पाराको’ आयो ! गीतबाट आएको पैसा गरिब, दुखीलाई नै सहयोग गरिने (भिडियो हेर्नुस)
शिशिर भण्डारी अभिनित गीत ‘बेईमानी पाराको’ भिडियो आज दिउँसो २ बजे युट्युबबाट आउँदै (भिडियो हेर्नुस)